Daawo: Golayaasha Xeer-dejinta oo kulankoodii 5aad uga furmay Garoowe Khudbado Xasaasi ah oo laga Jeediyey – Walaal24 Newss
April 8, 2019	0	By walaal24
Golayaasha xeer dejinta Soomaaliya Kulanka 5aad ayaa ka furmay magaalada Garowe ee magaalo Madaxda maamul Goboleedka Puntaland, shirka ayaa socon doona muddo labo maalmood ah ayaa waxaa ka qaybgelaya gudoomiye ku-xigeenka labaad ee barlamaanka Soomaaliya.
Gudoomiyayaasha barlamaanada Puntland, koonfur Galbeed, Jubbaland iyo Hirshabeelle & xoghayaasha barlamaanada iyo qaar kamid ah shaqaalaha xarumaha golayaasha shacabka, Inkastoo uu madasha ka maqnaa gudoomiyaha barlamaanka Galmudug.
Shirkaan waxaa mudada uu socdo diiradda lagu saari doonaa wadashaqaynta golayaasha xeer dejinta, iswaydaarashada xeerarka ay ansixiyaan golaha shacabka Soomaaliya iyo sidii barlamaanadu khibradaha u kala qaadan lahaayeen.
Waxaa goobta khudbado ka jeediyey Gudoomiye ku xigenka labaad Golaha Shacabka, Gudoomiyayaasha barlamaanada maamul Goboleedyada Puntland, Hirshabeelle, Jubbaland iyo koonfur Galbeed.
Halkan hoose ka Daawo furitaanka shirka:-
Maxaa sababay iney is casisho Xoghayihii amniga gudaha Dalka Mareynkanka?
Wasiirada Difaaca Dowladda Talyaaniga iyo wafdi ay hogaamineysay oo soo gaaray magaalada Muqdisho
Madaxweyne Famaajo oo ku bogaadiyay Gobolka Banaadir doorka ay ka qateen barnamijka Is xilqaan
Taliyaha Ciidamada Xooga Dalka Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo booqasho ku tagay Dalka Kuwait
Xisbiga muxaafadka ee Wadanka Bangladhesh oo ku guuleystay doorashada
Ra’iisal wasaare Kheyre oo lagu soo dhaweeyay magaalada Dooxa ee xaruunta Dalka Qatar
Tuulo ku taalo Dalka Mali oo dad tiro badan lagu dilay dad kalana la la’yahay